Global Voices teny Malagasy » Shina sy Frantsa: Atao fahirano ny vita frantsay · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina sy Frantsa: Atao fahirano ny vita frantsay
Voadika ny 10 Desambra 2008 21:02 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Frantsa, Shina, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Nisy lahatsoratra nivoaka tamin'ny 1 Desambra tao amin'ny China.com mampirisika ny firenena manontolo hanao fahirano ny vokatra frantsay ho fanoherana ny fihaonana eo amin'ny Filoha frantsay Nicolas Sarkozy sy ny Dalai Lama. Manome torohevitra ny mpanjifa ny lahatsoratra tsy hividy marika frantsay tokony ho 50 eo ho eo ka anatin'izany ny fiara, ny akanjo, ny zava-pisotro mahamamo ary fikojakojana hoditra (fikarakarana tarehy).
Ny filazan'ny gazetim-panjakana koa moa vao maika nandrangitra ho amin'ny fitiavan-tanindrazana. Ny lahatsoratra tao amin'ny China Daily nivoaka tamin'ny 8 desambra ohatra nitsikera ny fanapahan-kevitry Sarkozy ho toy ny “fihantsiana tsy azo leferina ”. Ny lahatsoratra hafa tao amin'ny China Review News indray nanome ny lisitry ny fifanarahana lehibe 4 misy eo amin'i Shina sy Frantsa izay mety ho tandindonin-doza manoloana izao fifanolanana ara-diplaomatika misy eo amin'ny roa tonta izao. Naverin'i  Guanqiaob navoaka indray izany lisitra izany tao amin'ny bolongany:
1. Nanasonia fifanarahana hividy airbus 160 avy any Frantsa ny orinasa shinoa, 10 000 000 000 euro ny totalim-bidin'ireo voromby ireo. Voafoaka ao anatin'ny entana moa ny airbus A320 miisa 110 sy A330 miisa 50.
2. Nisy savaranonandom-pifanarahana teo amin'ny orinasa frantsay Alstom sy ny fitaterana an-dalamby shinoa ny hamokarana Mpanetsikaratra (générateur) sy fiarandalamby miisa 1 400. Manodidina ny 1 200 000 000 euro izany fifanarahana izany.
3. Nanao soniam-pifanarahana momba ny fifandraisana amin'ny finday tamin'ny China mobile sy China Unicom ny orinasa frantsay Alcatel-Lucent. Mahatratra 750 000 000 Euro izany fifanarahana izany.
4. Hivarotra Deuterium Uranium 2 ho an'i Shina ny orinasa frantsay Areva ka mitentina 8 000 000 000 Euro ny fifanarahana.
Ankoatra ny fiheverana ara-toe-karena dia mifototra kokoa amin'ny resaka foto-kevitra fitiavan-tanindrazana no aely amin'ny aterineto. Ohatra azo raisina amin'izany ny antson'i 16fang hanao fahirano  sy ny fitodihana ny tantara:
Nikiry ny hihaona amin'ny Dalai Lama ny Filoha Frantsay Sarkozy ka nanao tsinontsinona ny fampitandremana sy ny fanoherana nataon'ny diplaomatintsika. Tsy i Shina taloha intsony anefa isika ka hanaiky hotrongisin'ny fiarahan'ny hery valo mitambatra. Lasa izao, miaraka isika, teneno ny olona manodidina anao hanao fahirano ny vokatra frantsay!
Niteny indray mandeha ny mpitari-tolona komonista Karl Marx: Ny fomba famokarana no mamaritra ny fifandraisana eo amin'ny famokarana. Hiaritra fanafihana betsaka ny firenena tratra aoriana, ny ra nalatsaky ny razambentsika no anatra ho antsika amin'izany, tsy tokony hanadino izany isika velona ankehitriny sy ny taranatsika! Niaritra fanimbazimbana isika tamin'ny fandrosoantsika taloha, efa firenena matanjaka kosa isika ankehitriny, mila miaro ny hajantsika isika.
NIsy hafatry ny tia tanindrazana iray nivezivezy tamin'ny alalan'ny QQ sy fifandraisana tsiroaroa (peer to peer) hafa. Lindsey CN dia efa nandika ity hafatra ity tany amin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Global Voices tany alohaloha tany :
Ho fampahafantarana anao:
Any Frantsa ny ankizy kely dia ampianarina hihiaka hoe: “AFAHO I TIBET!”
Nametraka ny Filoha Frantsay Atoa Sarkozy fa safidy ny fandavana ny hanao lalao olaimpika tany Beinjing,
Ny Ben'ny tanànan'i Paris nilaza fa tsy manana haja noho ny makorelina ny Shinoa any Afrika,
Fanahy ianian'ny Frantsay ny namono in'efatra ny afo olaimpika,
Lasa rojovy famatorana gadra ny endriky ny peratra olaimpika ary atonta amin'ny sarintanin'i Shina any Frantsa,
Namelatra ny sainan'ny mpitaky fizakantena Tibetana ny Ben'ny tanànan'i Paris ary nandà tsy hanatrika ny afo olaimpika,
Nanimbazimba ny afo tamin'ny alalan'ny eso, horaka, ompa ireto Frantsay mahafinaritra ireto.
Endrika vinitra no nandraisana ny afo masin'ny lalao olaimpika nandritra ny diany tany Frantsa,
Tsy naharo ilay Shinoavavy sembana nitondra ny afo olaimpika ny polisy Frantsay 3000,
Aorian'ny filazana ireo zavanisy rehetra voalaza eo ambony ireo, ry havana, dia mbola hangina sy tsy hiraharaha ihany ve ianao, ilazao aho hoe mitondra ny ran'i Yan sy Huang ihany ve ianao (Shinoa)?
Ry havana, inona no tokony ataontsika hitandroana ny haja amam-boninahitry ny tanindrazana tiantsika ity? Manao fahirano an'i Carrefour, eny, iray amin'ny zavatra vitsy tokony ary tsy maintsy ataontsika izany ho an'ny tanindrazantsika! Fa angaha isika tsy afa-miaina raha tsy misy Carrefour? na dia hoe 12 ora mandritra ny andro voalohan'ny taona aza izany?
Saingy mitandrema ry vahoaka tia fandriampahalemana amin'ity tanànan'ny fanatontoloana ity, ny fanaovana fahirano an'i Carrefour tsy midika
fa miady amin'ny namantsika isika Shinoa,
Fa hamaly ny herisetra amin'ny herisetra isika,
Fa mampiely ny fankahalana sy ny anay ny anay (nasionalisma) ihany isika,
saingy manao toy izao kosa izany
milamina amin'ny fanoherana ny fitsaratsarana ivelany sy ny fiangarana,
fanehoana amin'ny fomba zakan'ny hafa ny fahatezeran'ny Shinoa,
Fanambarana mibeso fa ny ra samy mena ary mahery isika,
ary hiaka ilazana amin'ny Frantsa izay eritreretintsika sy izay tsapantsika
Nangina isika nandritra izay fotoana lava izay ka lasa very ny fahasahiantsika. Saingy raha tsy misy ny fitakiana ny hajan'ny firenena, ry havana, aiza no ahafahantsika manorina ankohonana maha-te-ho-tia?
Ampitao amin'ny fianakavianao, ny namanao ary ny olom-pantatrao ity hafatra ity aza fady!
Namelabelatra teti-panorona ho amina fahirano lavitr'ezaka  kosa i Dream2008 :
1. Fikirizana ho amin'ny lavitr'ezaka sy tolona mafy;
2. Fahirano entin'ny saina ary miala herisetra!
3. Tokony hiankina amin'ny safidin'ny tsirairay ny hanao fahirano an'i Carrefour, tsy manao fandrangitana ary tsy manavakavaka ireo tsy mety hanao fahirano.
4. Tsy mankany Frantsa. fihetsika mahamenatra ny mitsangatsangana ho any Frantsa. Beazim-boho ny fizahan-tany eto an-toerana.
5. Mandrisika ny olo-malaza sy ny mpihira malaza hanao fahirano ny “rendrarendra” frantsay, manao fahirano izay mpihira malaza sy mpanao sinema malaza mbola manjifa sy manao dokambarotra vokatra frantsay.
6. Manao izay hampihen-danja ny entana “rendrarendra” Frantsay.
7. Tokony hitandrina tsara eo amin'ny fanaovana fahirano ny vokatry ny orinasa (eto Shina) ary idifiana izay mety hanimba ny toe-karentsika.
8. Mamorona teny faneva, hira, tononkira ary dokambarotra; (afaka mampiasa teny mahery vaika fa tsy manimbazimba kosa)
9. Manomboka aminao sy ny manodidina anao izany. Mila mampiroborobo ny fahirana isika fa tsy tokony hanery ny hafa kosa.
Tsy ny mpiserasera rehetra,na izany aza, no manohana ny fahirano, Tsy resy lahatra  amin'izany fihetsika izany i amoiist :
Ny fihetsiko voalohany dia hoe “karazana fahamendrehana inona moa izany”. Fa lasa aiza daholo ireny tanora nandritra ny fotoanan'ny ronono voapoizina rehetra ireny?
Nanambara i Kaoifeng fa tsy hanao izany fahirano  izany izy:
Tsy mahatakatra ny vokatra frantsay aho, saiky lafovidy be avokoa ny ankamaroan'ny entany. Mitovy amin'ny karamako iray volana ny vidin'ny akanjo vita frantsay iray any amin'ny botika. Ho an'ny mpiasa tahaka ahy, ahoana moa no andaniako vola amin'izany? Raha hoe tsy mahavidy no dikan'ny fahirano, dia mpanao fahirano aho izany, ary amin'izany dia tia tanindrazana mandrakariva aho.
Aza adinoina fa raha manao fahirano ny vokatra frantsay isika dia afaka mano fahirano ny entantsika ihany koa izy. Ka iza no miteny fa tombony hoantsika ny fahirano? andao isika hanao fampitambarana kely dia ho hitantsika hoe iza no mahazo tombony amin'ity lalao ity. Nandritra ny taona maro dia niankina tamin'ny fampiasambola ho amin'ny fanondranan'entana ny toe-karenantsika. Raha sanatria ka manomboka manao fahirano ny vokatra shinoa ny firenenkafa, dia hihena ny entana fanondrana ho ratsy kokoa noho ny amin'izao fotoana izao ny toe-karenantsika. Tsy fantatro mazava moa ny antontan'isan'ny fanondranana sy ny fanafarana misy eo amintsika sy ny firenena anatin'ny Vondrona Eoropeana. Raha toa ampitomboana 1000 ny fahavoazana mety ho azony, isika kosa manonitra hatramin'ny 10 000, aiza ny toeran'ny fahirano?
Ataon'i Twocold fanalan'andro  ny lisitry ny fandaharana sy ny antony hanaovana fahirano:
Voalohany: Tsy maintsy mba miala voly kely isika ary mahita izay mampihomehy aminy. Ny aty amin'ny misy antsika miteny fa “raha tsaraina amin'ny politika frantsay, dia saro-toerana i Sarkozy. Midina ny toekarena, miakatra ny tahan'ny tsy fananan'asa ary dia mihena ny fanohanan'ny vahoaka azy.Na izany aza dia nila niasa ho amin'ny zon'olombelona i Sarkozy ary ny raharaha momba an'i Tibet no natao ifantohan'ny ny olona ho fanalan'androny”.
Ampiharina amin'i Shina koa izay fomba fihevitra izay. Saro-toerana koa ny fitondrana Shinoa. Midina ny toekarena. Miakatra avo ny tahan'ny tsy fananan'asa ary dia mihena ny fanohanan'ny vahoaka azy.Na izany aza dia nila niasa ho amin'ny zon'olombelona (ny fitondrana Shinoa) ary ny raharaha momba an'i Tibet no natao ifantohan'ny ny olona ho fanalan'androny.
Faharoa: Tsy mahatakatra mividy vita frantsay. Mihena ny tahiry, mihemotra ny toekarenantsika, eo koa ny singa hafa tahaka ny angovo sy ny hetra ampiharina sns… Dia hihalafo kokoa ny vita frantsay izay efa tsy takabidy. Raha toa moa ka efa tsy mahatakatra, maninona raha miaraka amin'ny ekipan'ny mpanao fahirano mba hahazo ny anarana tsaran'ny tia tanindrazana? Rehefa mihatsara ny toekarena no afaka mampiasa tsara izany toerana tsara izany isika.
Fahatelo: afaka miaro ny governemantatsika isika. Zavadehibe izany. Ny dadantsika sy ny dadabentsika no nifantina ireo mpitondra antsika ireo, nefa dia misolo tena antsika ireo. Raha mety ny ataon'ny governemantantsika, midika izany fa mety ny ataontsika, rehefa tsy maintsy miatrika izy, ny dikan'izany dia tsy maintsy miatrika isika. Raha mandresy isika amin'ity tolona politika sy toekarena ity dia mandresy ny fitondrana. Fa raha resy kosa isika dia fahadisoantsika izay. Ampirisihan'ny vitsy an'isa ary ampitondrany ny onjan'ny fahaterentsain'ny nasionalisma ny sarambambe tsy mahalala zavatra. isika no manimba ny fifandraisana ara-diplaomatikan'ny firenentsika. Manome vahana ho an'ny governemantantsika isika hidirany amin'ny dingana manaraka.
Fahaefatra: afaka misoroka ny kolikoly ny fahirano… manana fiantraikany lehibe ho an'ny mpitondra antsika izay mailaka ny hanao dia anaty fianarana (voyage d'etudes) any ampitandranomasina izany. Ny vadin-dry zalahy no tena mpanjifan'ny fivarotana tsy andoavan-kaba. Raha manao fahirano ny vita frantsay isika dia hisalasala ry zareo hitondra entana lafovidy vita frantsay ho eto Shina. Ary satria moa tsy tena mpanara-damaody loatra ry zareo, dia mila fotoana maharitra mihitsy aloha ny hitady entana hafa ho solony. Amin'izay fotoana izay dia misoroka ny kolikoly ny fahirano.
Fahadimy: Manampy ny ekipako amin'ny fifaninanana fanamoriana fiara ny fahirano… (naotin'ny mpandika teny: ny tena mpifaninana voalohany amin'ny hazakazaka fiarakodia dia ny Citroen.)
Fahaenina: Voasoroka ny mety ho fandosiran'ny mpitondra ambony eto amintsika. I Frantsa manko no lasa fitoerana malaza indrindra anjavonan'ny mpitondra ambony mandritra ny dia anaty fianarana (voyage d'etudes)…
Fahafito: Hihena ny vola lany amin'ny fikaotiana sipa. Afaka miteny amin'ireo sipa mpirevy ireo vokatra frantsay lafovidy ireo ianao fa noho ny soa ho an'ny tanindrazana dia tsy hividy an'iny ianao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/10/1427/
 “fihantsiana tsy azo leferina: http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2008-12/08/content_7280233.htm
 hanao fahirano: http://16fang.blog.sohu.com/106025882.html
 dia efa nandika ity hafatra ity tany amin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Global Voices tany alohaloha tany: https://globalvoicesonline.org/2008/04/15/china-boycott-carrefour
 fahirano lavitr'ezaka: http://maqiang992000.blog.163.com/blog/static/54364991200811942835906
 Tsy resy lahatra: http://www.amoiist.com/2008/12/blog-post.html
 tsy hanao izany fahirano: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b3562fe0100bddq.html